FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA JINDO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Jindo
Angela the Jindo
Ny palitaon'ny Jindo dia tonga fotsy, mavo, mena, mena sy fotsy, mainty, mainty sy mainty, mainty, mainty sy mainty ary boribory.
Ny Jindo dia alika kely karazana zana-tsipaka avy any amin'ny Nosy Jindo any Korea. Mitovy endrika amin'ny kely kokoa Shiba Inu ary ny lehibe kokoa Akita , tany am-boalohany dia nobeazina ho an'ny lalao fihazana kely toy ny biby mpikiky izy raha lehibe toy ny diera. Saika ny Jindos rehetra dia manana finiavana mafy (eny fa na dia ireo toa manambaka aza) ary manana saina mahaleo tena. Tian'izy ireo ny mandehandeha ary fanahy malalaka izy ireo. Izy ireo dia mazàna ho karazana manjakazaka, manandrana manao zavatra araka ny fombany ary mety ho tena miaro ny olon-tiany sy ny faritany. Noho ireo toetra ireo dia tsy atolotra ho an'ny tompona tsy za-draharaha ny Jindos. Toy ny ankamaroan'ny karazany tsy miankina, mila ( ary miroborobo ambanin'ny ) fikirizana mafy nefa be fitiavana ary tsy miovaova. Ny tompony dia mila mametraka ny lalàna ary mifikira amin'ireny. Ny tompona nahazo ny fanajan'ny Jindo azy dia homena valisoa tsy fivadihana sy fankatoavana tsy manam-paharoa. Toy ny karazany rehetra, ny toetran'ny Jindo dia miovaova amin'ny kalitaon'ny fiompiana sy ny tontolo iainana. Ny Jindo mahazatra dia be fitiavana amin'ny olon-tiany ary voatokana amin'ny olon-tsy fantatra. Jindo mahazatra dia tsy haneho firaiketam-po amin'ireo olona nifanena taminy. Amin'ny tena maneho hevitra indrindra, dia sariaka amin'ny fomba malefaka izy io. Izy io dia mpiambina tena tsara ary hiambina ny trano sy ny fianakaviana mandra-pahafatiny raha ilaina izany. Fifaneraserana aloha amin'ny olon-tsy fantatra, alika hafa, saka , ary indrindra ny ankizy dia soso-kevitra mafy satria miaro ny ainy ny Jindos ary manana mpamily haza lenta. Noho ny fihazonany haza dia matetika izy ireo no tsy atokisana manodidina ny biby kely kokoa toa hamsters SY bitro .Etsy Korea dia tsy misy lalàna mifehy ny fady ary avela handeha malalaka i Jindos. Ny fanafihana tokana ataon'izy ireo dia toa alika hafa no atodika ary fomba iray fotsiny fametrahana fahefana na faritany.
alika kely pitbull orona fotsy sy fotsy
Haavony: Lehilahy 18 - 25 santimetatra (48 - 65 cm) Vavy 16 - 22 santimetatra (41 - 58 cm)
Milanja: Lehilahy 35 - 50 pounds (16 - 23 kg) Vehivavy 25 - 40 pounds (11 - 18 kg)
Alika salama tsara ny Jindo. Mety hiteraka olana ny hypothyroidism.
Ny Jindo dia tokony havela hipetraka ao an-trano miaraka amin'ny ankohonana mifanohitra amin'ny famindrana azy any an-tokotany izay mety hidiran-doza noho ny fahasosorana na manirery. Ny Jindos dia fantatra fa mandanja rindrina na fefy 8 metatra ny haavony. Na mahaleo tena toa azy izy, ny faniriany voalohany dia ny hiaraka amin'ny tompony. Raha mbola mandeha tsara izy ireo, dia mety ho mponin'ny trano mahafinaritra i Jindos noho ny fahamendrehana voajanahary. Jindos dia hikolokolo ny tenany toy ny saka hitandrina ny fahadiovany. Izy ireo dia tena mora ny manao housetrain.
jack russell terrier papillon mifangaro
Mila toerana hifindra ny Jindos. Tian'ireto alika ireto ny mandehandeha sy manadihady ny faritanin'izy ireo (izay amin'izy ireo dia somary mivelatra). Raha tsy hoe nampiofanina tsara momba ny fampatsiahivana dia tena ilaina ny mandeha amin'ny fitarihana Jindos amin'ny fotoana rehetra noho ny azy ireo fiara mihaza . Farafahakeliny roa isan'andro, 30-minitra mandeha haingana ilaina ary tokony ho ampy hitazonana ny Jindo sambatra. Mandritra ny diany dia ataovy izay tsy hamelanao ny alika handeha eo alohan'ny zanak'olombelona, ​​satria voajanahary ho an'ny mpitondra ny mandeha aloha. Na dia tsy malaza amin'ny fahaizany maka aza i Jindos, dia afaka ampiofanina izy ireo haka endrika iray izay endrika fanatanjahan-tena tsara koa. Ny filalaovana ady amin'ny Jindo dia tsy tokony hatao raha tsy mahazo antoka ny amin'ny tompony.
Ny Jindo dia manana palitao roa sosona izay milatsaka indroa isan-taona. Mandritra ny vanim-potoanan'ny fandatsahana dia mila fitandremana fanampiny ny palitao. Ny fandroana mafana dia afaka manampy ny fizotrany miaraka. Ilaina ny fikosehana isan'andro hanesorana ny akanjo ambany. Raha tsy izany dia miomana amin'ny palitao mihintsana.
Tany am-boalohany ny Nosy Jindo dia natsangana tany amin'ny Nosy Jindo any atsimo andrefan'ny Korea taonjato maro lasa izay. Nihalehibe izy ireo mba hihaza lambo, bitro, badger ary serfa, miasa amina vondrona na irery. Mampiavaka ny Jindo ny mampidina ny rembiny, avy eo miverina amin'ny tompony mba hitarika azy ho any amin'ny haza azony. Jindos dia nanomboka niseho voalohany tany Etazonia tamin'ny taona 1980. Ny Jindo dia arovan'ny lalàna Koreana ho tsangambaton'ny firenena. Ny tsy fivadihana sy ny fitiavany ny tompony, ny toetrany malaky, ny fahiratan-tsaina avoakany ary ny herim-pony tsy manam-paharoa no nahatonga ny Jindo ho alika malaza indrindra ao Korea.
Satria nokolokoloina hihaza sy hanampiana ny tompony tany amin'ny toeram-piompiana izy ireo tamin'ny voalohany dia azo raisina ho toy ny karazana miasa.
AKC - Vondrona tsy miankina amin'ny fanatanjahan-tena
Kobe the Jindo amin'ny faha-5 taonany
Heyou the whie Jindo
fangaro mainty sy fotsy
Steve ilay Jindo Koreana
Victoria ilay Jindo telo herinandro lasa alika kely
'Sambatra an uber-alpha vavy Jindo any San Diego aseho eto amin'ny 4 taona. Afa-po tanteraka izy ary tena mahafatifaty sy be fitiavana raha mbola fantatry ny anadahiny sy ny rahavaviny ny toerana misy azy ireo ... ary ny olona ao amin'ny fianakaviany dia mitazona azy hohanina tsara, manao fanatanjahan-tena ary miborosy ny nifiny! Isaky ny alina dia mandefa fety mihaza izy sy ny iray tam-po aminy, izay nandao ilay tokotanin-tsambo midadasika sy ala tsy misy bibidia. Miaraka am-pifaliana, offleash, ny tompony amin'ny jogging 5k isan'andro eo amoron-dranomasina. Saingy faly ihany koa izy amin'ny diany 30 minitra an-tongotra amin'ny alàlan'ny manodidina. Mbola mahita ny tenany ho renin'ny mpanjakavavy izy taorian'ny 4 taona: raha mbola manana kosa ny tompony Ampiofanina ny iray tampo aminy MANDEHANA eo akaikin'izy ireo dia natsipin'izy ireo tao anaty lamba famaohana ny fanandramana hampianatra an'io Jindo mafy loha io. Saingy nahazo tombony izany: rehefa reraka loatra ny tompona tsy hitantana ny ankohonany, i Happy dia vonona ny handray izany andraikitra izany. '
Kobe the Jindo- 'Kobe dia be herim-po sy mahira-tsaina, tsy mivadika ary manaja. I Kobe no Jindo farany tsara indrindra nananako tombontsoa nampiofana sy nankafiziko. Izy no santionany tonga lafatra amin'ny karazany. Ato amin'ity sary ity dia hitanao ny fahaizan'ny fitondran-tena Kobe. Nataoko teo am-pialana tanteraka tamin'ny tadin'ny Blvd Wilshire izy. raha mbola nitifitra azy avy hatrany. Nahazo ny laharana faha-3 ihany koa izahay tamin'ny fampisehoana alika Jindo tany LA tamin'ny 1998. Kobe sy Madala vadiny dia nanana zanak'alika iray izay hitanao eto ambany. Malahelo an'io zazalahy io, ilay 'Kobe the Jindo' malaza. Saingy izao dia manana ny zafikeliny aho ary tsara tarehy toa azy. '
Kobe the Jindo amin'ny fahatanorany miaraka amin'i Madala mpiara-monina aminy ao aoriana.
Kobe the Jindo miaraka amin'i Madala mpiara-monina aminy sy ny zanak'alikao.
mpiandry alemanina mainty misy tratra fotsy
Kobe the Jindo miaraka amin'ny zanany alika
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Jindo
Jindo Sary 1
ohatrinona ny lanjan'ny bulldog frantsay
afaka coyote miteraka alika
sisin-tany alika collie bernese tendrombohitra collise bernese
boxer boston terrier mifangaro alika kely
afangaro amin'ny laboratoara amerikana fotsy
ohatrinona ny habetsaky ny huskies any Alaska